ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ အောက်ဌာပနာ – XB Media Myanmar
ရွှေတိဂုံစေတီတော် အောက် ဌာပနာ လျို့ဝှက်ချက်၂-ခုကို အာမေးနီးယန်းလူမျိုး တယောက်က သိခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ စေတီတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီ တော်ကြီးရဲ့အောက်မှာ ပင်လယ်ရေ အတက်အကျ အလိုက် ရေ အနိမ့်အမြင့် ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ (၁၀) ပေ ပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ ရေတွင်းရှိတယ်။ အဲဒီ ရေတွင်းထဲမှာ အလျား (၆) ပေခွဲလောက်ရှိပြီး ရတနာများ စီချယ်ထားတဲ့ ရွှေလှေတစီး ရှိတယ်လို့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးခဲ့တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံဖွား အာမေးနီးယားလူမျိုး ဒီအက်စ်အပရမေက ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ (၁၃. ၃. ၆၈)နေ့ ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့တာကို ကျီးမနိုး တင်ဝင်း(ပေါင်းတည်)ရဲ့ ပြန်လည် ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်။
မစ္စတာ အပရမေကို ကြေးမုံသတင်းစာက တွေ့ဆုံ မေးမြန်းရာမှာ ၁၉၀၄.ခု၊ သူ့ရဲ့အသက် (၇) နှစ်သားအရွယ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ရွှေတိဂုံစေတီတော် ကို သွားရောက်ခဲ့တယ်။ ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော်ရဲ့အရှေ့မြောက်ထောင့်(တနင်္ဂနွေထောင့်)ရှိ ဌာပနာတိုက်ဝကို ရောက်တဲ့အခါမှာ ရသေ့ကြီးတပါးနဲ့ တွေ့လို့ ချဉ်းကပ် တောင်းပန်ပြီး ဌာပနာတိုက်ထဲကို ဆင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရသေ့ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရ ဌာပနာတိုက်ထဲကို ဆင်းသွားတဲ့ လမ်းတလျှောက်လုံးမှာ ယောဂီဝတ်နဲ့ နီဝါရောင်ဝတ် ပုဂ္ဂိုလ်(၇) ဦးကို (၈) ပေ၊ (၉) ပေစီ ခြားပြီး တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဌာပနာတိုက်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်ကို အုတ်များနဲ့ အခန်း(၃၆)ခန်း တည်ဆောက်ထားတယ်။ အလယ်တိုင် မရှိဘူး။ အလယ်ဗဟိုမှာတော့ (၁၀) ပေ ပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ ရေတွင်းရှိ တယ်။ ရေတွင်းဟာ ပင်လယ်ရေ အတက်အကျအလိုက် ရေ အနိမ့်အမြင့် ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေတွင်းထဲမှာ အလျား (၆) ပေ ခွဲခန့် ရှိပြီး ကျောက်မျက် ရတနာများနဲ့ စီချယ် ထားတဲ့ ရွှေကရဝိတ် လှေတစင်းရှိတယ်။ လှေဟာ ဒီရေ အတက်အကျအလိုက် ရေတွင်းထဲမှာ အနိမ့်အမြင့် လှုပ်ရှားနေတယ်။
ပင်လယ် ရေဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်နဲ့ အလင်းရောင် ယူထားပုံက ရှေးဗိသုကာတွေရဲ့ လက်ရာဖြစ်တယ်။ ခမ်းနား ဆန်းကြယ်တဲ့ ဌာပနာတိုက်ကို ကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်ခဲ့ရတာ ဖြစ်လို့ နှောင်းလူတွေ သုတေသန ပြုနိုင်အောင် ရွှေတိဂုံဂေါပကအဖွဲ့ကို မြေပုံဆွဲလို့ တင်ပြခဲ့တယ်။ ရွှေတိဂုံဂေါပကအဖွဲ့ကလည်း မစ္စတာ အပရမေ.ကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းပြီး ဌာပနာတိုက် တည်နေရာကို လိုက်လံ ပြသစေတဲ့အခါမှာ ဌာပနာတိုက် လှိုဏ်ဂူဟာ ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားနဲ့ ဆုတောင်းပြည့်တန်ဆောင်း နေရာမှာ ရှိတယ် ဆိုပေမဲ့လည်း နောက်တိုး တန်ဆောင်းတွေနဲ့ ဘုရားများ ထပ်မံ မွမ်းမံ ပြင်ဆင်ထားမှုကြောင့် အတိအကျ ပြသနိုင်ခြင်း မရှိပဲ ဆုတောင်းပြည့်စေတီရဲ့လှိုဏ်ဂူ အောက်မှာသာ ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်း ညွှန်ပြသွားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မစ္စတာ အပရမေ.ကို လွစ္စလမ်း (ယခု ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း ) အမှတ် (၂၅)မှာ ၁၈၉၅.ခုနှစ်က ဖွားမြင်ခဲ့တာပါ။ မိဘများမှာ မစ္စတာ အက်စ်အပရမေနဲ့ မစ္စက် ရိုစ်လူကပ်စ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီး ဒေါ်သိန်းရွှေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီး ၅.ယောက် ထွန်းကားခဲ့ကာ သားသမီး မြေးများနဲ့အတူ ဘောက်ထော်မှာ နေထိုင်တယ်လို့ သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Credit: ထိန်လင်း .. 13.9.2018 .. မှီငြမ်း:.. -ကြေးမုံသတင်းစာ(၁၃. ၃. ၆၈) … – ရွှေတိဂုံစေတီတော်အောက်က လျှို့ဝှက်ချက်… [ကျီးမနိုး တင်ဝင်း(ပေါင်းတည်)] မှတ်ချက်။ ။ မိမိ၏ အဖွားဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင်လည်း ဌာပနာတိုက်ဖူးခဲ့ဘူးကြောင်း နဲ့ အဖွားရဲ့ ပြောပြခဲ့မှုတွေနဲ့ အထက်ပါစာ ထပ်တူနီးပါးကျတာ တွေ့ရပါတယ်။